Complications and legal side of anal sex – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သငျဟာ စအိုနဲ့ လိငျဆကျဆံရတာကို ကွိုကျနှဈသကျသူတဈယောကျလား? ဒီလိုဆိုရငျ သငျသိထားသငျ့တဲ့ အခကျြတခြို့တော့ရှိပါတယျ..။ စအိုနဲ့ လိငျဆကျဆံခွငျးက သငျ့ဆီကို ဆိုးကြိူးတဈခြို့ကို ယူဆောငျပေးနိုငျပါတယျ..။ အဲဒါတှကေတော့….
(၁) စအိုပွဲတာ ဖွဈနိုငျတယျ..
အမြိူးသမီးတှရေဲ့ မိနျးမကိုယျနဲ့ မတူတဲ့အခကျြက စအိုဟာ သဘာဝခြောဆီမရှိပါဘူး..။ ဒါကွောငျ့ စအိုနဲ့ လိငျဆကျဆံတဲ့အခါ စအိုစုတျပွဲတာ…သှေးထှကျတာ… ဒဏျရာရတာတှဖွေဈနိုငျပါတယျ..။ ဒဏျရာအမြားစုဟာ သဘာဝအလြောကျ သူ့ဖာသာသူ သကျသာသှားတာမြားတယျဆိုပမေယျ့ ဒီဒဏျရာတှကေတဆငျ့ သှေးထဲကို ပိုးဝငျရငျတော့ ဆိုးဝါးတဲ့ နောကျဆကျတှဲတှဖွေဈနိုငျပါတယျ..။
(၂) HIV အပါအဝငျ လိငျကတဆငျ့ ကူးစကျတဲ့ရောဂါတှေ ပိုကူးလှယျတယျ
အကာအကှယျ သခြောယူမထားတဲ့ ဘယျလို လိငျဆကျဆံမှူမြိူးမှာမဆို ဒီရောဂါပိုးတှေ ကူးစကျနိုငျတယျ ဆိုပမေယျ့… စအိုနဲ့ ဆကျဆံသူတှမှော သမရိုးကြ ဆကျဆံသူတှထေကျ အဆသုံးဆယျပိုပွီး ရောဂါကူးစကျနိုငျခမြေားတယျလို့ သုတသေနတှကေ ဆိုပါတယျ..။
အမရေိကနျကငျဆာအဖှဲ့အစညျးရဲ့အဆိုအရ စအိုနဲ့လိငျဆကျဆံသူတှမှော စအိုကငျဆာဖွဈဖို့ ပိုအခှငျ့အလမျးမြားပါတယျ…။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ HPV လို့ချေါတဲ့ လိငျအင်ျဂါကွှကျနို့ပိုး ကူးနိုငျခပြေိုမြားပွီး ဒီကွှကျနို့ပိုးက ကငျဆာဖွဈစတေတျလို့ပါပဲ..။
(၄) တခွားရောဂါပိုးတှလေဲ ပိုကူးနိုငျတယျ…
စအိုဆိုတာ မြားပွားလှတဲ့ ဘကျတီးရီးယားတှေ ခိုအောငျးနထေိုငျတဲ့နရောပါ…။ တကယျလို့ သငျက စအိုကိုဆကျဆံပွီးတဲ့ အခြိနျမှာ သသေခြောခြာ ဆေးကွောသနျ့စငျတာတှမေလုပျဘဲ မိနျးမကိုယျထဲကို ပွနျထညျ့ပွီး ဆကျဆံမယျဆိုရငျ သငျ့ပါတနာအမြိူးသမီးဟာ ဆီးလမျးကွောငျးပိုးဝငျတာအပါအဝငျ တခွားရောဂါတှေ ကူးလာနိုငျတော့မှာပါပဲ..။
စအိုနဲ့ လိငျဆကျဆံတဲ့အခါ စအိုကြှံကခြွငျးဟာလဲ ရရှေညျမှာဖွဈနိုငျတဲ့ အခကျြတဈခကျြပါ..။
လလေ့ာမှူတဈခုအရ စအိုနဲ့ လိငျဆကျဆံတဲ့ အမြိူးသား အမြိူးသမီးတှရေဲ့ တဈဝကျလောကျဟာ.. တဈလမှာ တဈကွိမျလောကျအနညျးဆုံး ဝမျးထှကျကတြာဖွဈပါသတဲ့….။ ဒါဟာ အငျမတနျကသိကအောကျနိုငျပွီး လူမှူရေးမှာလဲ ပွသနာတှကွေုံနိုငျစတောမြိူးပါ..။
ဒါ့အပွငျ ခုခြိနျထိ မွနျမာနိုငျငံမှာ စအိုနဲ့ လိငျဆကျဆံခွငျးဟာ…တရားဥပဒနေဲ့မညီပါဘူး…။ တရားစှဲဆိုမှူတှတေော့ မကွားဖူးပမေယျ့… ဘယျလိုပဲ ဖွဈဖွဈ လူမှူရေးအရရော.. အရေးကွီးတဲ့ ကနျြးမာရေးရှူထောငျ့အရပါ ဆိုးကြိူးတှပေေးနိုငျတဲ့ အရာမို့ သတိထားသငျ့တဲ့ ဆကျဆံမှူတဈခုအနနေဲ့ သိထားသငျ့ပါကွောငျး တငျပွလိုကျရပါတယျ…။
သင်ဟာ စအိုနဲ့ လိင်ဆက်ဆံရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတစ်ယောက်လား? ဒီလိုဆိုရင် သင်သိထားသင့်တဲ့ အချက်တချို့တော့ရှိပါတယ်..။ စအိုနဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်းက သင့်ဆီကို ဆိုးကျိူးတစ်ချို့ကို ယူဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်..။ အဲဒါတွေကတော့….
(၁) စအိုပြဲတာ ဖြစ်နိုင်တယ်..
အမျိူးသမီးတွေရဲ့ မိန်းမကိုယ်နဲ့ မတူတဲ့အချက်က စအိုဟာ သဘာဝချောဆီမရှိပါဘူး..။ ဒါကြောင့် စအိုနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ စအိုစုတ်ပြဲတာ…သွေးထွက်တာ… ဒဏ်ရာရတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်..။ ဒဏ်ရာအများစုဟာ သဘာဝအလျောက် သူ့ဖာသာသူ သက်သာသွားတာများတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီဒဏ်၇ာတွေကတဆင့် သွေးထဲကို ပိုးဝင်ရင်တော့ ဆိုးဝါးတဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်..။
(၂) HIV အပါအ၀င် လိင်ကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေ ပိုကူးလွယ်တယ်
အကာအကွယ် သေချာယူမထားတဲ့ ဘယ်လို လိင်ဆက်ဆံမှူမျိူးမှာမဆို ဒီရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်နိုင်တယ် ဆိုပေမယ့်… စအိုနဲ့ ဆက်ဆံသူတွေမှာ သမရိုးကျ ဆက်ဆံသူတွေထက် အဆသုံးဆယ်ပိုပြီး ရောဂါကူးစက်နိုင်ချေများတယ်လို့ သုတေသနတွေက ဆိုပါတယ်..။
အမေရိကန်ကင်ဆာအဖွဲ့အစည်းရဲ့အဆိုအရ စအိုနဲ့လိင်ဆက်ဆံသူတွေမှာ စအိုကင်ဆာဖြစ်ဖို့ ပိုအခွင့်အလမ်းများပါတယ်…။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် HPV လို့ခေါ်တဲ့ လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့ပိုး ကူးနိုင်ချေပိုများပြီး ဒီကြွက်နို့ပိုးက ကင်ဆာဖြစ်စေတတ်လို့ပါပဲ..။
(၄) တခြားရောဂါပိုးတွေလဲ ပိုကူးနိုင်တယ်…
စအိုဆိုတာ များပြားလှတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ ခိုအောင်းနေထိုင်တဲ့နေရာပါ…။ တကယ်လို့ သင်က စအိုကိုဆက်ဆံပြီးတဲ့ အချိန်မှာ သေသေချာချာ ဆေးကြောသန့်စင်တာတွေမလုပ်ဘဲ မိန်းမကိုယ်ထဲကို ပြန်ထည့်ပြီး ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင် သင့်ပါတနာအမျိူးသမီးဟာ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာအပါအ၀င် တခြားရောဂါတွေ ကူးလာနိုင်တော့မှာပါပဲ..။
စအိုနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ စအိုကျွံကျခြင်းဟာလဲ ရေရှည်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါ..။
လေ့လာမှူတစ်ခုအရ စအိုနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ အမျိူးသား အမျိူးသမီးတွေရဲ့ တစ်ဝက်လောက်ဟာ.. တစ်လမှာ တစ်ကြိမ်လောက်အနည်းဆုံး ၀မ်းထွက်ကျတာဖြစ်ပါသတဲ့….။ ဒါဟာ အင်မတန်ကသိကအောက်နိုင်ပြီး လူမှူရေးမှာလဲ ပြသနာတွေကြုံနိုင်စေတာမျိူးပါ..။
ဒါ့အပြင် ခုချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စအိုနဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ…တရားဥပဒေနဲ့မညီပါဘူး…။ တရားစွဲဆိုမှူတွေတော့ မကြားဖူးပေမယ့်… ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူမှူရေးအရရော.. အရေးကြီးတဲ့ ကျန်းမာရေးရှူထောင့်အရပါ ဆိုးကျိူးတွေပေးနိုင်တဲ့ အရာမို့ သတိထားသင့်တဲ့ ဆက်ဆံမှူတစ်ခုအနေနဲ့ သိထားသင့်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်…။